Xasuuqii Abid Ugu Xumaa Oo Caawa Arsenal Loo Gaystay, Bavarians Oo Awoodooda Muujiyay Iyo Gunners Oo Mar Kale Wareega 16ka Rajo Xun Ka Qabta – Kooxda.com
Home 2017 February Champions League, Ingiriiska, Jarmalka, Wararka Maanta, Warbixino Xasuuqii Abid Ugu Xumaa Oo Caawa Arsenal Loo Gaystay, Bavarians Oo Awoodooda Muujiyay Iyo Gunners Oo Mar Kale Wareega 16ka Rajo Xun Ka Qabta
Xasuuqii Abid Ugu Xumaa Oo Caawa Arsenal Loo Gaystay, Bavarians Oo Awoodooda Muujiyay Iyo Gunners Oo Mar Kale Wareega 16ka Rajo Xun Ka Qabta
February 16, 2017 · by	Mustafa Atam · 0
Ciyaar u dhaxeysay kooxaha Bayer Munich iyo Arsenal ayaa goor dhaweyd kusoo idlaatay Alianz Arena kulan katirsanaa lugtii 1aad ee wareega 16ka Champions League.
Natiijada Ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 5:1 ay kooxda Arsenal si xun ugu xasuuqday dhigeeda Arsenal iyaga oo Alianz Arena jiid jiiday. Goolasha ay Bayer ku xasuuqday Arsenal.waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kala ah Robben, Lewondewski, Alcantra, iyo waliba Thomas Muller.
Safafkii Labada Kooxood
Bayern Munich: Neuer, Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba, Alonso, Thiago, Vidal, Robben, Douglas Costa, Lewandowski.
Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Gibbs, Coquelin, Xhaka, Iwobi, Ozil, Oxlade-Chamberlain, Sanchez.
Qeybtii Hore Ee Ciyaarta
Ciyaarta oo lasii ogaa inay tahay mid xamaaasa badan ayaa durtaba ku bilaabatay dardar xoogan waxaana weerarda ugu horeeyay qaadayay kooxda Bayer Munich.
Daqiiqadii 8aad Arturo Vidal ayaa awoodiisa tijaabiyay balse darbo daciif ah ayuu goosha Arsenal la beegsaday taasi oo goolhaye Ospina si dhib yar u qabtay.
Daqiiqadii 15aad Goooooooooooool! Arjen Robben ayaa kubad soo jiitay wuxuuna darbo qurxoon goosha Arsenal ka toogtay banaanka xerada ganaaxa isaga oo soo gooyay kubadihii lagu yaqaanay sidaasna shabaqa Arsenal kusoo taabtay. David Ospina ayay u suurto gali wayday inuu kubadaasi badbaadiyo. Ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 1:0 ay Bayer Munich hogaanka ciyaarta ku hayso.
Daqiiqadii 15aad Mar kale Arjen Robben ayaa kubad lasoo baxsaday wuxuuna isku dayay inuu dhaliyo balse goilhayr Ospina ayaa kaga dhagay kubadaasi.
Daqiiqadii 27aad kubad uu Mesut Ozil darbeeyay oo laad xor ah aheyd ayuu Manuel Neour dirqi ku badbaadiyay.
Daqiiqadii 29aad Rigooore! Kooxda Arsenal ayaa rigoore loo dhigay kadib markii uu Lewondewiski khalad ku galay Laurent Kosceilny. Waxaa rigooorada tuuray Alex Sanchez balse waxaa darbadiisa beeniyay Manuel Noeur. Goooooool!! Nasiib Badnaa Alex Sanchez!! Kubadii uu badbaadiyay goolhayaha Bayer Munich ayuu Sanchez kasoo boodada ku celiyay goosha wuxuuna sidaas ciyaarta uga dhigay 1:1.
Waxaa sidaas kusoo idlaatay qeybtii hore ee ciyaarta waxaana la aaday nasashada iyada oo ciyaartu maraysa barbaro min hal gool ah.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa la isku soo laabtay iyada oo labada dhinac midna wax bedel ah sameeynin.
Daqiiqadii 49aad Dhibaato! waxaa kooxda Arsenal dhaawac looga saaray daafacooda birlabta ahaa ee Laurent Kosceilny waxaana keydka looga yeeray Gabriel.
Daqiiqadii 53aad Goooooooooooool! Koxda Bayer Munich ayaa mar kale ciyaarta hogaanka u qabatay. Arjen Robben ayaa kubad u tuuray Philippe Lahm kadibna kabtanka Bayer Munich ayaa soo karoosay kubadaasi waxaana madax gantaal ah shabaqa Arsenal ku hubsaday Roberto Lewondowiski. Ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 2:1 ay Bayer Munich hogaanka ku hayso.
Daqiiqadii 56aad Goooooooooool Kale!! Kooxda Bayer Munich ayaa hogaanka sii dheeraysatay. Waxaa markana kubada soo qaatay Xavi Alonso oo u baasay Lewondwiski kaasi oo u dhiibay Thiago Alcantra. Alcantra ayaa goolkan si dhib yar u dhameeys tiray. Ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 3:1 ay Bayer hogaanka ku dheeraysatay.
Daqiiqadii 63aad Gooooooooooooooooooool!! Bayer Ayaa mar kale hogaanka sii dheeraysatay. Waxaa mar kale shabaqa soo taabtay kadib markii uu hrlay kubad kubad kasoo booday goolhaye Ospina. Ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 4:1 ay kooxda Bayer Munich hogaanka ku xoraysatay.
Wax ka yar 10 daqiiqo ayay rajadii Arsenal ee Champions League kusoo idlaatay waxaana layaab leh sida ay Gunners 10 daqiiqo gudaheed 3 gool u qaabishay.
Falanqeeyayaasha iyo dadka kubada cagta ka hadla ayaa durtaba su’aalo iska weydiinayay safka uu Arsene Wenger usoo xushay kulankan adag oo ay ku jiraan xidigo ay kamid yihiin Goolhaye Ospina.
Daqiiqadii 82aad Badbaadin! Doulas Costa ayaa kubad soo jiitay wuxuuna darbo joog hoose ku socota la beegsaday goosha Arsenal balse goolhaye Ospina ayaa darbadaasi beeniyay.
Daqiiqadii 84aad Arsenal ayay war farxad leh u tahay. Philip Lahm ayaa kaarka huruuda ah loo taagay kadib markuu Chamberlain dhulka dhigay wuxuuna seegi doonaa kulanka lugta labaad.
Daqiiqadii 88aad Gooooooll! Chamberlain ayaa khalad sameeyay waxaana kubada qaatay Alcantara kaasi oo u tuuray Thomas Muller. Muller ayaa intuu kubada jiitay daba mariyay David Osmpina. Ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 5:1 ay kooxda Bayer siday doontaba ka yeelatay Arsenal.
Ugu danbeyn ciyaar kooxda Arsenal si xun loo soi xasuuqay ayaa kusoo idlaatay 5:1 ay guushu ku raacday kooxda Bayer Munich oo marti loo ahaa.
Filed in: Champions League, Ingiriiska, Jarmalka, Wararka Maanta, Warbixino